Famandrihana mamonjy aina ho an'ny fiainanao ankehitriny: Martin Vrijland
Filed in NY SIMULATION	by Martin Vrijland	amin'ny 22 Jolay 2019	• 19 Comments
Fotoana izao hialana amin'ny tontolo nofinofy ary hanomboka hijery ny tontolo manodidina anao noho izay mendrika. Izany dia hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainanao. Noho izany dia tiako ny mampifantoka ny sainao amin'ny fampisehoana eto ambany an'i Richard Thieme (eo ambanin'ny faran'ity lahatsoratra ity), pretra iray teo aloha izay niova ho mpitaingina iray ary nokaramain'ny orinasa toa an'i Arthur Andersen, Allstate Insurance, General Electric, ny National Security Agency (NSA) ), Microsoft, ary ny Departemanta Amerikana momba ny Tahirim-bolam-panjakana. Ity famelabelarana ity dia milaza ny zavatra rehetra ilainao hahafantarana izao tontolo izao ankehitriny.
Raha ianao ny lahatsoratrao Vakio ny momba ilay lehilahy tsy mananaina (sy ireo sarin-dahatsoratry ny mpanamboatra an'io simulation io), dia ho takatrao fa ireo olo-malaza toa an'i Richard Thieme dia anisan'ny tarika farany. Ny mpamaky vaovao dia mety te-hiala amin'ity sazy farany ity, fa manoro hevitra anao aho mba hianatra izay tena lazaina eto ary nahoana ny antoko sy mpahay siansa no milaza fa miaina ao anaty simulation. Tsy atao tsinontsinona izany ary tena ilaina ny mandinika. Izaho mihitsy no milaza izany tena ilaina mba hahatakatra ny fivoaran'ny androany; hahafantatra izay misy azy ary hahitana izay mbola azo atao momba ny fiarandalamby lamasinina sy ny famitahana izay azo jerena ao amin'ny media sy ny politika. Na koa:
Amin'ny fametrahana ity lohahevitra ity dia ho hitanao ny fototry ny olana rehetra eto amin'izao tontolo izao ary koa ny vahaolana.
Ny sazy fanokafana nataon'i Richard Thieme nandritra ity fihaonamben'ny Def Con hackers ity avy amin'ny 2015 (jereo ny lahatsary etsy ambany) dia mendrika ny mandinika tsara. Tsarovy fa: ity famelabelarana ity dia efa vita efa-taona, noho izany, ny toe-draharaha eo amin'ny sehatry ny fandrosoana ara-teknolojika, nofaritan'i Thieme, dia mihenina ankehitriny raha mitadidy ny lalàna Moore. Na dia izany aza, araka ny filazan'ny sasany, ny lalàna Moorish dia tsy ho marina intsony, raha tsy teo amin'ny faran'ny fampihenana ny haavon'ny sehatry ny sambo (ny fanodinkodinam-pandrenesam-pandrenesana izay mampiorina ny fototry ny lalàna Moore) mba hanatsarana ny fivoaran'ny toe-javatra sehatry ny tambajotra tsy miankina (izay mahatonga ny lalàna Moore ho toa marina indray).
Ny tamba-jotra niorina
Ny tambajotra vaovao dia manandrana mandika ny asan'ny atidoha. Ny atidoha dia voaofana hatramin'ny fahaterahana ary ny mpanabe dia miteny amintsika rehefa mahita saka iray na inona ny teny hafa. Mianatra isika avy amin'ny 'angon-drakitra' izay ampianarin'ny ray aman-drenintsika sy ny mpampianatra antsika. Ny tambazotran'ny neurologie dia mianatra amin'ny tahirin-kevitra izay raisiny. Io tahirin-kevitra io dia tsy maintsy manara-maso ny mpanara-maso iray hampiofana azy. John Hennessy, mpahay siansa momba ny informatika Amerikana, academician, mpandraharaha ary filoham-pirintin'ny Alphabet Inc. (Google), manazava ity fampisehoana ity ny lanjany sy ny fomba fiasan'ny AI sy ny tambajotra.
Ny zavatra azonao ianarana avy amin'io famelabelarana io dia ny maha-zava-dehibe ny angon-drakitra. raha manolotra izany ho an'ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao, toy ny Snapchat, Instagram ary ny karazan-loharanom-baovao sosialy hafa izay ahafahana mamorona angon-drakitra, dia azonao eritreretina hoe inona izao tontolo izao dia toy ny amin'ny 'setroka be dia be' miova. Izaho sy ianao dia manome ny angon-drakitra ampiasain'ny AI mba hampiofanana.
Ny fampisehoana an'i Hennessy ihany koa dia efa lany andro, satria efa nahavita ny AI izay niasa tamin'ny PC tsotra i Facebook fa tsy ny ordinatera super mega avy amin'ny Google Alphabet izay nianatra ny lalao sarotra indrindra. Mandehana amin'ny fotoana sy avy amin'ny mpilalao mahay indrindra eran-tany. Facebook dia nanangana rafitra AI (antsoina hoe Pluribus) fa nahavita nandresy ireo mpilalao poker lehibe avy tamin'ny 6. Io AI io dia mitifitra mpilalao marobe amin'ny valim-pandresena. Ny lalao tahaka ny Go dia mora mora amin'ny AI, na dia misy aza ny tsimok'andriana boribory kokoa noho ny misy atôs amin'ny universe be mpamaritra (satria ny zavatra rehetra dia farafaharatsiny azo jerena). Izany dia mahatonga ny AI ho mora kokoa amin'ny fiofanana. Tsy mitovy amin'ny poker izany, satria mifototra amin'ny mpilalao marobe ianao. Noho izany dia sahy nanaparitaka ity fanambarana manaraka ity ny Facebook:
"Tsy azo antoka ny milaza fa eo amin'ny olombelona ambony isika ary tsy hiova izany."
We are 2019 ary ny fivoaran'ny teknôlôjia dia miharihary. NVIDIA, ilay mpandrindra ny sarimihetsika ho an'ny indostrian'ny lalao (izay lehibe lavitra noho ny indostrian'ny sarimihetsika) dia efa nanangana tamba-jotra nasionaly izay mahatonga azy io ho tsotra tsotra deepfakes mba hamoronana sy hamoronana tontolo iainana lalina. Noho izany dia tsy ho vitanao ny hanohy ny fivoaran-draharaha, dia hieritreritra ianao.
Raha toa i Richard Thieme miresaka ao amin'ny fampahafantarana etsy ambany momba ny teknôlôjia izay efa fantatra taloha, dia azonao alaina sary an-tsaina hoe aiza izao isika izao. Mbola mihevitra ny ankamaroan'ny olona fa miresaka momba ny SciFi isika ary miresaka amin'ny sarimihetsika na ny andian-dahatsary Black Mirror ao amin'ny Netflix. Fotoana izao ho hitanao fa efa zava-misy daholo ireo zavatra rehetra eritreretinao ireo.
Ny fiantraikan'ny eritreritra
In ity lahatsoratra ity Niresaka ny fampisehoana an'i Elon Musk momba ny orinasa Neuralink aho, izay manangana serasera amin'ny ordinatera amin'ny aterineto ho an'ny fifandraisana an-tserasera amin'ny aterineto ary fampiharana iray hifehezana ny interface. Raha mijery ny fanehoan-kevitra Thieme etsy ambany ianao, dia ho hitanao fa ny toe-draharaha ara-teknolojia momba ny raharaha ao 2015 dia mbola lavitra kokoa. Ao amin'ny DARPA dia efa afaka manipika ny atidohan'olombelona izy ireo tsy misy implants. Ny iray amin'ireo sehatry ny fikarohana dia ny fanarenana ny fahatsiarovana, ny fanesorana ny fiampangana ara-pihetseham-po avy amin'ny fahatsiarovana, ny fanesorana fahatsiarovana manokana, ny fanovana ny votoatin'ny fahatsiarovana sy ny fametrahana fahatsiarovana vaovao. Ny iray hafa dia miezaka ny mamaky ny saina an-tsaina ary mamoaka vaovao. Ny iray hafa dia manadihady ny fampiasana ADN hahatakatra sy hamerina ny fomba fisainana, fahatsapana ary fitondran-tena. Ny iray hafa dia mampiasa ny fifandraisana amin'ny saina, amin'ny fijerena lavitra (amin'ny maso sy atidoha hafa), ary koa ny implant sy ny teknolojia tsy manasatra izay mifehy ny angovo electromagnetic ao amin'ny atidoha mba ahafahan'ny psychokinesis, ny fitsaboana ary ny telepathy.
Azonao sary an-tsaina ve hoe firy ny 'tambajotra vaovao' misy ny Neuralink ao Elon Musk raha manana olona an-tapitrisany manapa-kevitra ny hanantona ny atidohany ao anaty rahona? Azonao sary an-tsaina ve ny toe-javatra iainantsika amin'izao fotoana izao, raha toa ka ampiasaina miaraka amin'ny tambajotra 5G ireo teknika tsy misy fanodikodinam-po ampiasaina amin'ny atidoha (izay efa misy araka ny voalazan'i Richard Thieme)?
Richard Thieme dia manazava ihany koa ny toetry ny raharaha momba ny biolojia manontolo amin'ny vatan'olombelona sy ny biolojian'ny zavamananaina rehetra. Araka ny nilazako teto amin'ny tranokala nandritra ny taona maro dia lasa rafitra sy olana momba ny angona ny biôlôjia. AI, fanangonana tahiry goavana (ny angon-drakitra ahafantarana ireo tambajotra vaovao) amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao sosialy sy ny toy izany ary ny fivoaran'ny teknolojian'ny nanônika miaraka amin'ny fahalalan'ny sela sy ny zenôma noforonina, taova sy rantsana. Thieme dia nanindry fa ny zavatra hitantsika ao amin'ny famoahana siantifika dia farafahakeliny dimy taona ambadiky ny toeram-pitsaboana tahaka ny efa nataon'ny DARPA. Ny famindrana ny loha monkey dia azo natao am-polo taona lasa izay. Mandritra izany fotoana izany dia mihalehibe ny tambazotran'ny atidoha sy ny tamba-jotra an-jazakely ary manamboatra ny gidro.
Satria ny atidoha dia misy neurons 80 lavitrisa, ny tambajotra tena lehibe indrindra izay mety ho azon'ny orinasa lehibe teknika, governemanta sy ny sampany (tahaka ny DARPA), mazava ho azy fa ny atin'olombelona.
Ny bio-avatar olombelona sy ny programa AI izay mifehy ny atidoha
Andao hiverina amin'ny dingana voalohany hiainantsika amin'ny simulation (izay nanamarika fa tsy afaka miaina na oviana na oviana na oviana na oviana ianao, saingy amin'ny ankamaroan'ny traikefa dia ny fahitana tanteraka amin'ny simulation, toy ny Playstation mpilalao dia tena very mihitsy ao amin'ny lalao), ny vatan'olombelona dia tsy misy afa-tsy ny avatar ao amin'ny lalao ary ny atidohan'olombelona dia bio-processor io avatar io, izay nampiofana ny AI ny fandaharam-pianarana vaovao tsy dia milamina. in ity lahatsoratra ity Nohazavako tamin'ny an-tsipiriany izany toerana izany.
Tena zava-dehibe ny hahitanao ny fototry ny fanambarana etsy ambony. Hahita ianao fa tsy ilay olona hitanao rehefa mijery ny fitaratra ianao. Mijery ny mason'ny bio-avatar ianao (ilay olona simulated tamin'ity zava-misy simba ity), fa ny tena mpijery dia ivelan'ity simulation ity (toy ny mpilalao Playstation dia mipetraka eo am-pandriana miaraka amin'ny mpanatontosa eo an-tanany).
Andao hijery tsara azy io dingana roa fanandramana avy amin'ny mpahay fizika Niels Bohr, dia maneho izany fa misy ihany ny misy rehefa misy mpandinika. Ao amin'ny lahatsoratra maromaro nohazavaiko fa efa "miaina anaty simulation" isika. Manomboka tsara ianao raha ianao ity lahatsoratra ity Vakio tsara ny lohahevitry ny menu 'simulation' na midira amin'ny teny hoe 'simulation' amin'ny sehatry ny fikarohana. Mamela izany fampidirana ato ambadik'io aho, ary mametrahako ny fisainana amin'ny fiheverana fa efa "miaina anaty simulation" isika. Tsy nieritreritra an'izany aho tamin'ny teny nindramina, satria tsy afaka miaina amin'ny simulation ianao, fa afaka ny hanana ny fatokisanao tanteraka fa miaina ao anatin'izany, fa ny tena hita sy milalao (avy any ivelany).
Raha toa ka milalao simulation isika, dia tsy maintsy misy 'fifandraisana amin'ny fanahy' miaraka amin'ny karazany tany am-boalohany, toy ny tsy maintsy hisy fifandraisana an-tserasera 5G miaraka amin'ny ohatra simulation Google cloud raha toa ianao ka mandray anjara amin'ny simulation izay azo itokisana amin'ny 2045 miseho. Izany 'fifandraisana amin'ny fanahy' izany dia ny fifandraisana amin'ny serasera amin'ny 'olona voalohany'. Ny sarinao ao amin'ny simulation dia 'fitaomam-panahy' ary voafehy ivelany. in ity lahatsoratra ity Manazava amin'ny an-tsipiriany ny atao hoe fitaomam-panahy aho sy ny fomba tsy misy tsy manan-tsahala karazana tsy manana anarana (NPCs) manodidina anao, fa koa avatars izay fehezin'ilay mpanamboatra (na 'ekipa mpanamboatra') ny simulation. Ny famakiana io lahatsoratra io dia manampy amin'ny fahatakarana tsara kokoa ny foto-kevitra hoe "fanahy" na "fahatsiarovan-tena".
Ny simulation ny viriosy lazalista dualistic
Tiako ny hampisarika ny sain'ny mpamaky ny teny fanokafana nataon'i Richard Thieme avy amin'ny fampisehoana etsy ambany. Raha ny hevitro, ireo teny ireo dia endri-tsoratra kristiana mazava tsara fa ity avatar (Richard Thieme) ity dia natsangan'ny ekipa mpanorina. Ohatra, ao anatin'ny segondra 20 voalohany dia miresaka amin'ny teny toy ny hoe "ankizy mitonantonana tsy misy dikany" satria fantany fa izy ireo dia avatars amin'ny fampiofanana; Ireo avatara tarihin'ny ekipa Losifera (avy ivelan'ity simulation ity). Ireo ankizy milaza ny tsy misy ankehitriny dia manana toerana manan-danja eo amin'ny sehatra 'tsara sy ratsy'. Avelao ireo teny ireo ho tonga soa aman-tsara, satria izy dia manoritra ato anatin'ny segondra vitsy fa io simulation io dia miorina amin'ny sehatra avy amin'ny tsara mankany amin'ny ratsy (dualism, ny yin / yan, tia / marina, Christian / Muslim, programmers / hackers ary izany rehetra izany manome endrika ary mihazona dualisma). Nilaza ihany koa izy fa efa hitan-dry zareo mialoha fa ho tonga "mpitarika mpandinika" amin'ity taonjato ity ity "ankizy tsy lazaina" ity; ary efa lasa izy ireo.
Avy any amin'ny faharoa 28e, dia manohy izy amin'ny fanazavana fa ireo "avatars" (araka izay iantsoako azy ireny) dia mibahana ireo toerana manan-danja ary namorona ny toerana, izay antsoiny hoe 'ny habaka IT na ny fiarovana na ny tsy fandriam-pahalemana ananantsika rehetra. Ao anatin'izany teny izany dia lazainy amin'ny mpihaino azy izay zavatra tsy isalasan'izy ireo mahafantatra (satria izy ireo no ekipa lazaina ho lazaina amin'ny lazan'i Luciferiana), fa ny zavatra tena ilainareo sy ny tenako dia tena mila mamakivaky anay. Miaina ao ianao duality IT (fiarovana sy tsy fandriampahalemana). Miaina ao anaty simulation ianao.
Ny mpihaino mazàna dia mety mbola mihaona amin'ny:Tsy misy dikany, miresaka amin'ny valan-dresaka ho an'ny hackers izy ary izany dia mikasika ny fiarovana sy ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny sehatry ny ordinatera sy ny tambajotra Internet na orinasa ary ny sisa". Na izany aza, raha avelanao hitarika anao ny fampisehoana manontolo, dia ho hitanao ny toerana misy an'i Thieme echt miresaka momba izany. Mihainoa fotsiny avy amin'ny 40e faharoa izay hamerimberenany ny tenin'ny mpisorony: "Namorona ny sehatra ao amin'izany miaina isika ". Ny fanoloran-kevitra rehetra manaraka dia tsimponina ary i Thieme dia misokatra be sy miavonavona momba ny fomba fitambaran'ny masombolam-panjakana miaraka ary mora foana.
Ny fampidirana manontolo amin'ny 3e dia mamoaka fanambarana, ao anatin'izany ny 2: 45e minitra, izay ilazany hoe: "Ity fampisehoana ity dia miezaka manakiana ny zava-misy fa ny olona dia rafitra misokatra momba ny vaovao sy ny angovo". Fotoana izao ho anao sy izaho hahita zavatra tahaka ny azy ireo. Ny siansa dia mihevitra ny biolojia iray manontolo ho rafi-baovao. Rafitra fampahalalam-baovao izany. Fandaharana izany. Izany dia programa AI. To be precise, a simulation. Ny sarintanin'ny lalam-pifandraisana ananantsika amin'izao fotoana izao dia ny iray izay nanorenana ity simulation ity ho sahirana hanangana simulation vaovao: simulation-in-a-simulation, araka izay hazavaina ao amin'ny ity lahatsoratra ity.
Nahoana isika no eo amin'ny sarintan-dalana mankany amin'ny fananganana simulation-in-a-simulation? Ny ekipa mpanara-maso - ireo avatars izay tarihin'ny ekipa mpanorina an'i Luciferian (avy any ivelany) - Tiako sy ianao handao ny bio-avatars (ny vatan'olombelona) ho an'ny transhumanism mba hiaraka amin'ny AI. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia zava-dehibe ny hahatakatra tsara hoe iza ianao ary noho izany dia tokony ho hitanao amin'ny maha-zava-dehibe ny zava-drehetra (misy). in ity lahatsoratra ity Ny hazavana ataoko dia manao ny 'cellule stamme' misy antsika. Raha vantany vao novakianao izany, dia mety ho hitanao fa ny sela misy ny fisiana - ny fampidirana manontolo ny fampahalalam-baovao - dia nanome endrika endrika singa tokana (toy ny sela misy sela mamorona sela izay samy manana iraka fananganana tsirairay ao amin'ny vatana) . Ny sela tsirairay dia manana ny toetrany tsy manam-paharoa ary manana ny iraka fananganana azy manokana. Ao amin'ny vatana dia misy sela iray miova ho mason-koditra ary ny iray kosa dia mivoatra ao am-po, sy ny sisa. Ny endritsoratra tany am-piandohana (izay maminavina / milalao ireo simulation) dia ny endrika endrika fahatsiarovan-tena voalohany; ny maha-izy anao. Izany no tena endriny tena izy.
Ny simulation izay hitantsika ankehitriny dia tsara indrindra ho viriosy. Araka ny hevitro dia vavolombelona (mpijery / mpilalao) isika ao anaty simulation virtoaly marobe. Tena manokana (vakio ny famantarana sy ny fivoarana rehetra) miresaka momba ny simulations momba ny virosy Luciferian isika. Ny toetra mampiavaka ny viriosy dia ny manandrana hanafika sy haka ny vatana. Araka ny hevitro, izany no drafitry ny fananganana ity simulation ity. Ny rafitra virtoaly dia naorina manodidina ny 'cellule d'être de tout ce qui est'; mba hikolokoloana, hanala sy haka ny loharano-base-code-of-everything-inona (izay antsoina koa hoe 'ny sehatra quantum'). Azo atao izany raha miteraka sela hafa. Ny rafitra AI izay iainantsika (mahatsiaro / milalao) dia maniry ny hamolavolantsika ny endrika maha-isika antsika (endriky ny endriky ny endrika kreôkrita tokana) misy ao amin'ny rafitra viriosy.
Na izany aza dia fantatsika ihany koa avy amin'ny biolojia (avy amin'ny sarin'ny olombelona) fa misy viriosy hitsapana ny rafitra ary mety ho resy ny virus. Na dia amin'izao vanim-potoana misy ny vakim-pahasalamana izao aza dia mahazo ny fahatsapana fa very ny asany fanasitranana ny vatan'olombelona, ​​mazava ho azy fa diso (ary koa fampielezan-kevitra). Ny maha-isika antsika ny maha-izy azy (ny fahatsiarovantsika voalohany) dia afaka miady amin'ny viriosy ary mandresy ny rafitra viriosy. Mila mahatsiaro fotsiny hoe iza isika. Tsarovy fa tsy ny vatanao ary tsy ny eritreritrao ianao. Ny eritreritrao dia ny programa AI izay ampiofanina eo amin'ny tambajotra neuran'ny bio-central processor (ny atidoha) izay mihazakazaka ao amin'ny efitranon'ny efitranonao; Ilay olona hitanao eo amin'ny efitranon'io simulation io izay miaraka aminao izay mamaritra ny tenanao. Ny rafitra virtoaly dia rava rehefa mahatsiaro ny endri-tsaintsika manokana isika: ny fahatsiarovantsika voalohany izay avy amin'ny sela misy azy rehetra.
Ny Papa François dia nanolotra fivavahana vaovao iraisam-pirenena
Tags: 2.0, atidoha, Con, def, hamaritra, editig, Featured, Gene, Hack, voajirika, olombelona, interface tsara, An-dehilahy, zava-misy, Richard, simulation, simulation, Thieme
22 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 54
Mampitaha ny simulation amin'izao fotoana miaraka amin'ny vokatr'i Droste aho, mitovy amin'ny Ouroboros, faribolana mamitaka izay vitsy no mahafantatra ny fomba hamakiana azy ...
22 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 55
Ny mpandinika dia ny fanamarihana
22 Jolay 2019 ao amin'ny 16: 38
..izay efa nahazo ny fanamafisana ahy, jereo ity fanehoan-kevitra ity
2 minitra lasa izay
Fotoan'ny fotoana (Kronos.Saturn), ny mpanara-maso dia notsongaina..mipetraka amin'ny simulation ny duality fahavalo manohitra dia ampiasaina hanamarinana ny vokatra
22 Jolay 2019 ao amin'ny 17: 19
Ny scripty roa (ny script izay miasa araka ny fitsipiky ny duality) dia alefa amin'ny tari-dalan'ny "avaratry ny elatra" (ireo avatars izay tarihin'ny ekipan'ny mpanorina an'i Losifera).
Tadidio fa ny simulation dia simulation foana raha manana safidy malalaka ny mpilalao. Raha tsy izany dia ho voaorina mialoha ny vokatra ary tsy ho simulation intsony izany fa sarimihetsika.
Ny avatars izay manandrana manitsy ny script dia tsy maintsy manosika ny mpilalao hiverina amin'ny alàlan'ny duality. Ity duality ity dia mamoaka azy ireo amin'ny lalana iray (toy ny ampaham-batana sy ny minus amin'ny baoritra mamorona angovo mivantana).
Izany no ahafahantsika mahatsapa ny duality na aiza na aiza.
22 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 02
"Ilay mpanara-maso dia voamarika"
"Ny fanoherana dia ny fanampiana" !!
23 Jolay 2019 ao amin'ny 22: 17
22 Jolay 2019 ao amin'ny 17: 27
Ny tantara mahafinaritra rehetra, nefa tena tsotra sy sarotra ara-panahy ny manao an'izany izay tena tsotra, somary sarotra kokoa.
Tena tsotra tokoa izany ary ny fahatsorako no namintina ahy tao amin'ny lahatsoratra 1. Izany dia mamonjy ireo lesona sarobidy sy lafo ara-panahy.
Isika no mpilalao hita ao anatin'io simulation virtoalin'ny multifetsy maro io. Tsarovy ny fahaleovantenanao ary ny lalao. Izany no izy!
Noho izany dia tsy nidina na very ianao, tsy voafandrika ianao, tsy eto ianao (ary tsy maintsy miverina) .. Tsy mila "mandositra an'ity matrice ity" ianao. Raha ny zava-misy, raha toa ianao ka milalao playstatipn, ny selanao voalohany dia eo am-pandriana miaraka amin'ny mpitantana eo an-tanana. Ianao dia mbola mipetraka ary ianao dia orinasam-pamokarana fototra hatrany.
Noho izany dia manapa-kevitra isika fa ity virosy ity dia tsy afaka manindrona / manindry ny sela. Nanapa-kevitra izahay fa noho izahay mahita izany.
22 Jolay 2019 ao amin'ny 17: 34
Ny fanehoana an'io vokatr'i Ouroboros io dia noforonina toy izao:
22 Jolay 2019 ao amin'ny 17: 40
Ny fanombantombanana ny faritry ny vatana vaovao ao amin'ny vatana vaovao indray dia mora ny manorina amin'ny fananana mpamolavola Luciferiana hanangana simulation amin'ny simulation. Jereo koa ny fanehoan-kevitra etsy ambany.
Ao ny tontolo ara-panahy ary ny gurus dia eo mba hitazomana antsika hiala amin'ny fahamarinana ary hampino antsika fa eto isika ankehitriny. Raha hitanareo fa hitantsika ny simulation (na dia simulation-in-simulations) aza, dia tsapatsika fa tsy afaka ny ho tena IN, fa ny mijery fotsiny. Mbola eo ihany ny mpanara-maso ary mifehy.
Tsara ny mahita an'io atidoha io.
22 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 18
Fantatsika fa amin'izao fotoana izao. Heveriko fa ho anao-mpamaky voalohany, ny horonan-tsarin'i Chiron Last youtube dia mety ho maso misokatra.
Amin'ny maha-mpandidy azy dia afaka manampy anao hanao fanombohana hampiditra izany rehetra izany izy. Manazava tsara izy fa ny dualisma dia tsy zavatra fandraisana anjara satria manohana ny simulation (fanampiana ny fanoherana).
Tsy maintsy nieritreritra an'izany nandritra ny fotoana ela aho taona vitsy lasa izay (fony aho nahita voalohany ny andian-drakitry ny tranonkala volamena) ... Tsy maintsy nijery azy ireo tamin'ny 15 ihany koa aho.
Ankehitriny izany dia tapaka ao anaty haizina (ho antsika) fa ho an'ny olona iray izay hanao fanadihadiana fotsiny dia azo antoka fa tena sarobidy tokoa.
hans coudyser nanoratra hoe:
22 Jolay 2019 ao amin'ny 19: 25
Vetivety fotsiny ny famakiana izany.
Taorian'ireo fakantsary dia nesoriko ny satroko tsy misy.
Matetika aho no manana ny fahatsapana fa izaho / isika mihitsy no nanoratra io soratra tany am-piandohana io ho an'ny tany - raha tsy izany dia kopia iray eto - ary nisy zavatra noraisina na 'nanoratra' izany tamin'ny fomba izay nanananay ny tenanay manokana tsy nahitana na avy amin'ity toerana ity dia tsy afaka mahita hoe ahoana no i edm edm.
Ny zavatra ataoko dia misongadina ny momba ny maha-izy azy momba izany. Raha tadiaviko - amin'ny famolavolana simika ny fahatsiarovan-tenako - dia tsy handany mihoatra - raha tsy misy io fahagagana io dia tsy maintsy atao amin'ny simulation izany.
22 Jolay 2019 ao amin'ny 22: 12
Midika ve ianao fa nosoratanay ny rafitra viriosy momba ny viriosy amin'ny endriny samihafa?
Tsy fantatro raha azoko tsara.
Azonao atao ve ny manazava indray ny dikany?
23 Jolay 2019 ao amin'ny 00: 50
@Hans, Thieme dia manazava izany amin'ny fiteny luciferian sasantsasany amin'ny famelabelarany amin'ny fampiasana ny baozin'i Möbius ho fanoharana.
Ny zavatra iray izay nisy tamin'ny universe mobius-strip-noforonina dia tsy azo tsinontsinoavina avy amin'ny sary fitaratra azy manokana - ity mpihazakazaka ity dia mamandrihan'ny mpitaingin-tsoavaly lehibe kokoa eo anelanelan'ny havia sy havanana amin'ny isa rehetra. Tsy voatery hoe izao tontolo izao no mety hanana an'io fananana io, jereo ny non-oriental wormhole
23 Jolay 2019 ao amin'ny 00: 56
23 Jolay 2019 ao amin'ny 06: 11
Fiainana eto an-tany na eto an-tany na dia kely aza tahaka izao no nosoratanay. Ny fandaharan'asa luciferiana dia 'ovarana' nampidirina tao ho toy ny viriosy - araka izay nofaritan'ny anao, anisan'izany ny duality sns ... Tsy nosoratanay - mba 'hampatanjaka anay'. Izany dia avy amin'ny fiaviana hafa miaraka amin'ny tombontsoany manokana. Ny fototra niaviantsika dia tsy misy mifehy azy io ary mandray soa avy amin'ny sns ... - afa-tsy? - avy amin'ity simulation ity - amin'ny simulation - azo jerena izany. Ny virus dia manala ny endriky ny endriny
23 Jolay 2019 ao amin'ny 09: 24
Fiainana eto an-tany na eto an-tany na dia kely aza tahaka izao no nosoratanay. Ny fandaharan'asa luciferiana dia 'ovarana' nampidirina tao ho toy ny viriosy - araka izay nofaritan'ny anao, anisan'izany ny duality sns ... Tsy nosoratanay - mba 'hampatanjaka anay'. Izany dia avy amin'ny fiaviana hafa miaraka amin'ny tombontsoany manokana. Ny fototra niaviantsika dia tsy misy mifehy azy io ary mahazo tombony avy amin'ny etsy ... - Raha tsy izany - avy amin'ity simulation ity - amin'ny simulation - dia azo raisina izany. Ny viriosy dia manamboatra ny endriky ny endriny ary mampiasa izany mba hahazoana izany traikefa sy fahalalana izany amin'ny alalantsika. Ity rafitra viriosy ity dia tsy natao hanamafisana antsika, fa ny vokatra tsara indrindra no vokatr'izany. Ny tany dia nosoratanay, mba hampihomehy sy hahatsikaritra anay fotsiny. Tsy misy fanoherana, fandaharana dualista ilaina mba hiainana izany. Io hevitra io dia 'napetraka' tao.
23 Jolay 2019 ao amin'ny 10: 26
Safidy izany. Azo atao ihany koa ny namolavolan'i Losifera kopia ny zavatra nataontsika taloha.
Na manao ahoana na manao ahoana ny fihodinanao na mamadika izany, dia i Luciferianina amin'ny natiora ary na oviana na oviana ny manodina azy na mamadika azy dia tsy hamaha izany isika amin'ny "Sims level".
23 Jolay 2019 ao amin'ny 10: 45
Hitako amin'ny teny lazainao fa mbola tianao ny hifikitra amin'ny foto-kevitra hoe "fiainana eto an-tany". Tsy miaina eto an-tany isika. Efa namantatra ny tenanao ianao miaraka amin'ny "fahatsapana ara-nofo".
Ny programa ati-doha ao amin'ny atianao (antsoina hoe 'ego') izay te hanaraka an'io hevitra io.
Aleo mandeha izany: mandray anjara amin'ny fampihetseham-peo marobe ianao ho mpandinika ivelany. Tsy miaina eto an-tany ianao. Tsy misy ny tany sy izao rehetra izao. Simulations!
23 Jolay 2019 ao amin'ny 12: 23
Tsara sy mahafinaritra lahatsoratra. Mampalahelo fa ity fahalalana ity dia tsy natokana ho an'ny 'tany'. Ny 'tany' dia miasa toy ny fitaovana, ny mpiasa, ny fitaovana, ny "elite" mpifindrafindra toaka ao anatin'ity simulation ity. Raha toa ka afaka mandresy lahatra ny 'elit' mpifindrafindra monina isika mba hampakatra ny tenany ho any Saturn. Saingy indrisy fa tsy manao an'izany izy ireo nomena an-tsitrapo ny fandeferana sy ny tombontsoa azony amin'ny alalan'ireo toerany lehibe ao anatin'ity simulation eto an-tany ity.
« Manana fifandraisana amin'ny lehilahy mpandova ve i Elon Musk? Halalino ny mozik'ireny Grimes ireny eto
Ny fandalinana ny fianarana neuroscientific avy amin'ny taranja pedofile Jeffrey Epstein dia tafiditra lalina ao amin'ny tambajotra manan-danja lehibe indrindra eran'izao tontolo izao »
Total visits: 13.000.657